Football Khabar » लियोनको घरमा युभेन्टस स्तब्ध : चलेन रोनाल्डोको जादु !
लियोनको घरमा युभेन्टस स्तब्ध : चलेन रोनाल्डोको जादु !
प्रतियोगिताकै एक प्रमुख उपाधि दाबेदार टिम इटालियन क्लब युभेन्टस युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम १६ को पहिलो लेगको खेलमा पराजित भएको छ । नेपाली समयअनुसार बिहीबार बिहान लियोनको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा युभेन्टस १–० ले स्तब्ध बनेको हो ।
लियोनको घरमा कमजोर प्रदर्शन गरेको युभेन्टसले ९० मिनेट र थप ५ मिनेटसमेत गरी ९५ मिनेटमा एक सट पनि टार्गेटमा हान्न सकेन । जहाँ लियोनले १२ सट हान्दा २ सट टार्गेटमा हान्दै एकमा गोल पनि निकाल्यो । तर, युभेन्टसका १४ सट सबै अफ् टार्गेट थिए ।
लियोनले भ्रमणकारी टोलीविरुद्ध उत्कृष्ट रक्षात्मक खेल खेल्दा युभेन्टसका कुनै पनि फरवार्डको जादु चलेन । यस खेलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पाउलो डिबाला निष्प्रभावी देखिए ।
घरेलु टोली लियोनका लागि खेलको ३१औं मिनेटमा लुकास टोउसर्टले गोल गरेका थिए । उनले एउआरले दिएको क्रस पासमा सहजै गोल गरेका थिए । उनको प्रहार युभेन्टसका गोलकिपरले रोक्न मौकासमेत पाएनन् ।
त्यसपछि बाँकी समयभरि युभेन्टसले १ गोल पनि गर्न नसक्दा खेल लियोनले १–० ले जित्यो । अब यो जितसँगै युभेन्टसमाथि आफ्नो घरमा अर्को महिना हुने दोस्रो लेगमा नतिजा उल्टाउनुपर्ने दबाब बढेको छ ।
प्रकाशित मिति १५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०३:४०